Nsogbu Ahịa: Gịnị bụ ya? Kedu ụdị?
Marketingre ahịa Mgbasa na Mgbasa Ozi: Teknụzụ na Usoro
Ozugbo m banyere n'ime mpaghara Kroger (ụlọ ahịa) m, m na-ele anya na ekwentị m na ngwa ahụ na-eme ka m mara ebe m nwere ike ibute akara m Kroger Savings maka ịlele ma ọ bụ na m nwere ike imeghe ngwa ahụ iji chọọ ma chọta ihe dị na uzo. Mgbe m gara n’ụlọ ahịa Verizon, ngwa m na-eme ka m nwee njikọ iji chọpụta tupu m apụ apụ n’ụgbọ ala.
Ndị a bụ nnukwu ihe atụ abụọ nke ime ka ahụmịhe onye ọrụ dabere na ya hyperlocal triggers. A maara ụlọ ọrụ ahụ dị ka Nsogbu Ahịa.
Ọ bụghị obere ụlọ ọrụ, na-atụ anya na-eto eto na $ 52.46 ijeri USD site 2022 dị ka MarketsandMarkets.
Gịnị bụ Proximity Marketing?
Ọnụnọ ahịa dị nso bụ sistemụ ọ bụla nke na-eji teknụzụ ọnọdụ iji kpọtụrụ ndị ahịa ozugbo site na ngwaọrụ ha. Ọnụnọ ahịa dị nso nwere ike itinye onyinye mgbasa ozi, ozi ahịa, nkwado ndị ahịa, yana ịhazi usoro, ma ọ bụ ọtụtụ usoro ntinye aka n'etiti onye ọrụ ekwentị na ebe ha nọ nso.
Ojiji nke idi nso di na ahia gunyere nkesa nke mgbasa ozi na egwu, ozi, egwu egwu, na ngwa ndi mmadu, nlele ahia, uzo ugwo, na mgbasa ozi mpaghara.
Ọbịbịa dị nso abụghị otu teknụzụ, ọ nwere ike mejuputa ya site na iji ọtụtụ ụzọ dị iche iche. Ma ọ bụghị nanị iji ama. Laptọọpụ ọgbara ọhụrụ ndị GPS na-arụ nwere ike nwekwara ike lekwasịrị anya site na mbọhọ teknụzụ.
NFC - Ọnọdụ nke ekwentị nwere ike kpebisie ike site nso-ubi nkwukọrịta (NFC) nyeere na ekwentị ijikọ RFID mgbawa na ngwaahịa ma ọ bụ mgbasa ozi. NFC bụ teknụzụ etinyere maka Apple Pay na teknụzụ ịkwụ ụgwọ ndị ọzọ mana ọnweghị oke ịkwụ ụgwọ. Dịka ọmụmaatụ, ụlọ ngosi ihe mgbe ochie na ihe ncheta nwere ike ịwụnye ngwaọrụ NFC iji nye ozi njegharị. Lọ ahịa na-ere ahịa nwere ike itinye NFC na shelf maka ozi ngwaahịa. Enwere ikike ịzụ ahịa ohere na teknụzụ NFC.
Geofencing - Ka ị na-ejigharị na ekwentị gị, a na-ejikọ njikọ ekwentị gị n'etiti ụlọ elu. Usoro ozi ederede ederede nwere ike iji ọnọdụ gị mee ka ozi ederede ndị naanị n'ime ngwaọrụ ndị dị na mpaghara. A maara nke a dị ka Ntughari SMS. Ọ bụghị teknụzụ a kapịrị ọnụ, mana ọ nwere ike ịba uru iji hụ na ezigara ndị na-ege gị ntị ịchọrọ oge ị chọrọ.
Bluetooth - Ọnọdụ ụlọ ahịa nwere ike iji mgbama na ike jikọọ gị ama. A enwere ngwa mkpanaka nke na-enyere teknụzụ na ikike aka ịrịọ. Nwere ike ịkwanye ọdịnaya site na Bluetooth, jee ozi na weebụsaịtị sitere na WiFi, jiri mgbama ahụ dị ka ebe ịnweta Internetntanetị, rụọ ọrụ dị ka ọnụ ụzọ eji adọrọ adọrọ, nye ọrụ mmekọrịta, ma rụọ ọrụ na enweghị njikọ Internetntanetị.
RFID - E nwere teknụzụ dị iche iche nke na-eji ebili mmiri redio amata ihe ma ọ bụ ndị mmadụ. RFID na-arụ ọrụ site na ichekwa nọmba Oghere Usoro ahụ na ngwaọrụ nke na-achọpụta ihe ma ọ bụ mmadụ. Ihe omuma a di na microchip nke di na antenna. Nke a ka ana-akpọ mkpado RFID. Mgbawa ahụ na-ebufe ozi NJ onye na-agụ ya.
Nso ID - Ndị a bụ mbọhọ kaadị ma ọ bụ kọntaktị NJ kaadị. Kaadị ndị a jiri antenna agbakwunyere iji kpọtụrụ onye na-enweta ihe ntanetị n'ime obere sentimita ole na ole. Kaadị ịbịaru nso bụ naanị ngwaọrụ ndị a na-agụ ma na-ejikarị eme ihe dị ka kaadị nchekwa maka nnweta ụzọ. Kaadị ndị a nwere ike ịnwe oke ozi.
Ieslọ ọrụ ndị chọrọ ịzụlite nyiwe ndị a na-eji ngwa mkpanaka ndị ejikọtara, na ikike, gaa na ọnọdụ ọnọdụ nke ekwentị mkpanaaka. Mgbe ngwa mkpanaka ahụ na-abanye n'otu ọnọdụ ala, mgbe ahụ Bluetooth ma ọ bụ NFC teknụzụ nwere ike ịkọwa ọnọdụ ha ebe enwere ike ịmalite ozi.
Marketingre ahịa nso adịghị achọ ngwa dị oke ọnụ na teknụzụ Geocentric
Ọ bụrụ n'ịchọrọ ịre uru nke ịbịaru nso na-enweghị teknụzụ niile… ị nwere ike!
Koodu QR - nwere ike igosipụta akara ngosi na otu ebe yana koodu QR na ya. Mgbe onye obia jiri ekwentị ha nyochaa koodu QR, imaara ebe ha no, puru iziputa ozi ahia di nkpa ma hu omume ha.
Hotspot WiFi - Inwere ike inye hotspot wifi n'efu. Ọ bụrụ n’itinyela njikọ ụgbọ elu ma ọ bụ ọbụbụ Starbucks, ị hụla ọdịnaya azụmaahịa siri ike nke na-eme ka onye ọrụ banye na ihe nchọgharị weebụ.
Nchọgharị Ihe Nchọgharị ekwentị - Gwunye geolocation na ebe nrụọrụ weebụ gị iji chọpụta ndị na-eji Mobile Browser na ọnọdụ gị. Nwere ike ibute popup ma ọ bụ jiri ọdịnaya siri ike kwụsị onye ahụ - ma ha nọ na WiFi gị ma ọ bụ na ha anọghị. Nanị ihe dị na nke a bụ na a ga-ebu ụzọ jụọ onye ọrụ ikike.
Nhọrọ mgbazinye emepụtawo ihe omuma a dika ihe omuma nke ahia di nso maka ulo oru ndi pere aka na ndi pere aka (SMEs):
Tags: osisiBluetoothahia Bluetoothmgbazinye egogeofencingakụrụngwaahịa hotspotỌnọdụ hyperhyperlocalhyperlocal ahịaibeakondị ọkara ahịamobile nchọgharịna nso nso nkwukọrịtanfcidi nso ahiaidi nso ahia onu oguguKoodu QRObere ulo oru ndi ozoobere azụmahịaSMEGịnị bụ mbọhọ ahịawifi hotspot
Feb 4, 2016 n’elekere 9:30 nke abali
Ihe ngwọta ahịa dabere na nso nso, nwere ike inye ndị ahịa gị ahụmịhe ịzụ ahịa ahaziri ahazi
Feb 19, 2016 na 5:40 PM
Nice Blog daalụ maka ịdepụta nhọrọ dị iche iche. Anọ m na-eche ka onye ọ bụla n'ime ha na-egwu na oghere a. Ị mara ebe m nwere ike ịhụ ndepụta nke ndị na-emepụta teknụzụ Proximity Marketing kacha elu? Ana m achọ teknụzụ Bluetooth.